Imbiki Herilaza: “Fanariana zo ny vato fotsy” | NewsMada
Imbiki Herilaza: “Fanariana zo ny vato fotsy”
“Lasa toy ny miantso ny olom-pirenena hanary ny zony ny fanentanana azy amin’ny fanaovana vato fotsy, hitsipaka ny adidiny ary indrindra mitarika ny olona hitodi-damosina amin’ny fitondrana ny raharaham-pirenena.”
Io ny fanehoan-kevitry ny mpahay lalàna, Imbiki Herilaza, manoloana ny fisian’ny hetsika vato fotsy mitaona ny mpifidy hanao vato fotsy amin’izao fifidianana filohan’ny Repoblika fihodinana faharoa, izao.
Raha dinihina amin’ny lafiny etika sy moraly politika, tsy tsara ihany ny fanentanana ny olona amin’ny fanaovana latsa-bato fotsy. Ny antony, tsy maintsy ny iray amin’ireo kandidà roa ireo no hitondra ny tany sy ny firenena mandritra ny dimy taona.
Noho izany, tokony ho amin’ny alalan’ny latsa-bato ny vahoaka malagasy tsirairay no hifidy ny olona hitondra azy, ary misafidy ihany koa ny hevitra sy ny paika hitondrana ny firenena.